Madaxii ugu sareeyey Sirdoonka dalka Itoobiya Getachew Assefa oo uu xilka ka qaaday Ra`iisulwasaaraha dalkaas Dr Abiy Ahmed ayaa hadda iska dhiibay dalka Suudaan, – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Madaxii ugu sareeyey Sirdoonka dalka Itoobiya Getachew Assefa oo uu xilka ka qaaday Ra`iisulwasaaraha dalkaas Dr Abiy Ahmed ayaa hadda iska dhiibay dalka Suudaan,
Madaxii ugu sareeyey Sirdoonka dalka Itoobiya Getachew Assefa oo uu xilka ka qaaday Ra`iisulwasaaraha dalkaas Dr Abiy Ahmed ayaa hadda iska dhiibay dalka Suudaan, wuxuuna ka baxsaday in ay xirto oo ay qabato dawladda Faderaalka ee Itoobiya.
Xog laga helay laamaha Ammaanka ee dalka Suudaan ayaa shaaciyey in Mr, Assefa oo ay wehliyaan qoyskiisa qaar kamid ah ay soo gaareen xadka labada dal ay wadagaan, sidaasna ay ku qaabileen laamaha Ammaanka ee dalkaas.
Warbaahinta guduhu waxay sheegtay in madaxii hore ee Sirdoonka uu ka goostay Xukuumadda Addis Ababa, dabcana hadda u muuqdo mid u baxay sidii uu uga soo horjeesan lahaa ficilada uu wado Ra’iisulwasaaraha Oromada ah.
Jen, Getachew wuxuu ka soo horjeeday siyaasadda deg deg ah ee Dr Abiy Ahmed, wuxuuna taasi ku sababsaday in uu ku waayo xilkii uu hayey mudada dheer, waxaana lagu tiriyaa mid kamid ah Tiirarka adag ee ay ku taagneyd dawladda Itoobiya.
Xog laga helay xagga laamaha Amniga ayaa lagu ogaaday in uu Jeneraalkan baxsigiisa kahor maalmo kusugnaa magaalada uu ku dhashay 1944-tii ee Makelele, isagoo halkaas kula kulmay Madaxda Xisbiga Tigree-ga oo ay ka wada hadleen arrimo badan oo ku saleysan sidda ay hadda u socoto Siyaasadda Itoobiya.
Ka bixidiisa dalka ayaa Xisbiga talada haya ku ah arrin weyn oo kala shaki ah, xili ciidamada Milateriga ee dalkaas laga soo saaray xadka ay la wadaagaan Eritrea, sidaas oo kale xarunta TPLF ayaa gabi ahaanba laga saaray wixii ciidan heer Federaal ah ah ee kusugnaa, ka dib markii ay diideen.
Shalay cod aqlabiyad leh ayay Xisbiga EPDRF ku ansixiyeen in lasoo xiro Sarkaalkan horey u haystay Nabadsugida Qaranka & Nabadgalyadda Itoobiya, balse goor dambe ayaa la ogaaday in uusan joogin dalka Itoobiya, Qoyskiisana la qaaday xataa xili hore.
Jen, Assefa hadda waxaa horyaala arrimo culus, dadka yaqaana waxay ku sifeeyaan nin wax badan isku xira kara, xog badana ayuuna ka hayaa gudaha dalkaas waxa ka socda, saameyn fara badan ayuu ku leeyahay arrimaha gobalka oo dhan, taas oo ka dhigan mid uu ka faa’iideysan
Previous MD Gaas Oo SLand Ku Edeyay In Ay Alshabaab & Daacish Taagerto
Next Shabaab ayaa soo bandhigay Saraakiil iyo askar kuwooda ah oo xiran dharka Ciidamada Dowladda Somaliya, gaar ahaan kuwa la biixyay xiliyadii udanbeeyay.